प्रधानमन्त्री ओलीले ‘ढाँटे’को नयाँ तथ्यांक र यथार्थमा कति अन्तर ? Darpansansar News
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आइतबार प्रतिनिधिसभाको वैठककलाई सम्बोधन गर्दै वर्तमान सरकार गठन भएपछि विकासको कामले गति लिएको र मुलुक समृद्धितर्फ अघि बढेको दाबी गरे ।
उनले आर्थिक सूचकहरु सकारात्मक रहेको दाबी समेत गरे तर सरोकारवाला निकाय र विज्ञहरुले दिएका तथ्यांक र प्रधानमन्त्रीका तथ्यांकमा भने ठूलो अन्तर रहेको छ । यो तथ्याकंबाट प्रधानमन्त्रीले जनतालाई सरासर ढाँटेको पुष्टी गर्छ ।
प्रधानमन्त्रीले प्रस्तुत गरेका तथ्यांक र नेपाल राष्ट्र बैंक, व्यापार तथा निकासी प्रवद्र्धन केन्द्र, उद्योग विभाग एवं महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका तथ्यांकसंग मेल नखाएको पाइयो ।
प्रधानमन्त्रीले मूल्य वृद्धि घटेर ३ दशमलव ७ प्रतिशतमा सिमित भएको तथ्यांक प्रस्तुत गर्नुभयो । तर राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक बर्षको कात्तिक महिना सम्मको तथ्यांक यहि पुष ९ गते सार्वजनिक गरेकोमा मूल्य बृद्धिदर ४ दशममल २ प्रतिशत रहेको छ ।
प्रधानमन्त्रीले पूँजीगत खर्च २५ दशमलव तीन प्रतिशतले वृद्धि भएको दाबी गरे । तर महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयको वेबसाइटमा सार्वजनिक तथ्यांक अनुसार सोमबार सम्म विकास खर्च जम्मा १५ दशमलब चार नौ प्रतिशत मात्र भएको देखिन्छ ।
प्रधानमन्त्रीले व्यापारघाटा १ दशमलव शून्य पाँच प्रतिशत घटेको दाबी गरे । तर व्यापार घाटा कम हुनको सट्टा झन बढ्दै गएको तथ्यांक छ । यस अवधिमा व्यापार घाटा करिव ३८ प्रतिशतले बढेर ४५४ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ पुगेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांक छ ।
व्यापार तथा निकासी प्रवद्र्धन केन्दले सार्वजनिक गरेको ५ महिनाको वैदेशिक व्यापारको तथ्यांकमा नेपालको कुल निकासी १२.३ प्रतिशतले वृद्धि भर्ई रु ३७.५० अर्व तथा कुल पैठारीमा ३३.८ प्रतिशतले वृद्धि भई रु. ६०७ अर्व पुगेको छ ।
गत बर्षको यसै अवधिमा निकासी, पैठारी व्यापारको अनुपात १ः१३.६ रहेकोमा आ.व. २०७५/७६ को सोही अवधिमा निकासी-पैठारी व्यापारको अनुपात १ः१६.२ रहेको केन्द्रको तथ्यांक छ ।
यसरी आफुले प्रस्तुत गरेका तथ्यांकमाथी नै ब्यापक प्रश्न उठे पछि प्रधानमन्त्री ओलीले सोमबार राजधानीमा आयोजित कार्यक्रममा यसरी बचाउ गरे ।
यता अनुसन्धान तथा तथ्यांक सम्बन्धी काम गरिरहेको संस्था फ्याक्ट्स नेपालले तथ्याकंलाई नयाँ ढंगले प्रस्तुत गरेको छ ।
प्रधानमन्त्रीको प्रस्तुतीले उनको सचिबालय नै मजवुत र सक्षम छैन भन्ने देखाएको छ भने प्रधानमन्त्री स्वयम पनि कति जिम्मेवार र गम्भीर छन् भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ ।
काठमाडौं । नारायणहिटी दरबार सङ्ग्रहालयका १० कोठा (कक्ष) सर्वसाधारणको अवलोकनका लागि खुला ...